More na mkpọsa ndị ọchụnta ego Bulgarian maka ụlọ nkwari akụ Kempinski ọhụrụ na Tanzania
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » More na mkpọsa ndị ọchụnta ego Bulgarian maka ụlọ nkwari akụ Kempinski ọhụrụ na Tanzania
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • fim • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Iwughachi • Resorts • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Njem nlegharị anya bụ isi ihe na -elekwasị anya na Tanzania. Otu ndị nnọchi anya sitere na Bulgaria n'izu gara aga nọ na Dar es Salaam, Tanzania iji kpaa maka ọrụ njem nlegharị anya ọhụrụ nke German Kempinski Hotel Group.
Otu a nwere nlebara anya zuru oke site n'aka Hon. minista Dr. Damas Ndumbaro, na Cuthbert Ncube, onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Africa.
Kempinski Hotel Group nke Munich, Germany na -eme atụmatụ iwu ụlọ nkwari akụ Five Star Kempinski na Northern Tanzania
Ụlọ nkwari akụ ahụ kwesịrị ịdị na Tarangire nke Northern Tanzania, Ọdọ Mmiri Manyara, Ngorongoro na ogige anụ ọhịa Serengeti.
Onye isi ala Samia emeela ihe onwe ya iji duzie akwụkwọ akụkọ pụrụ iche, “Njem Royal”Ezubere iji mee ka ụwa mara ebe ndị njem nlegharị anya nke Tanzania nọ.
Ndị nnọchi anya ndị na -etinye ego na Bulgaria nọ na Tanzania n'izu gara aga ka ha kpaa maka itinye ego itinye ego na nkwari akụ nde dollar 72 na mba ahụ.
Maazị Ayoub Ibrahim, onye bụ onye isi oche nke Mauritius- UK International Tourism and Investment Conference bụ onye na-elekọta ndị nnọchi anya na-eleta Tanzania n'izu a.
Dabere na isi mmalite eTN, owuwu nke Kempinski Resort ọhụrụ na mba ahụ ga -amalite na Jenụwarị 2021. eTurboNews gakwuuru Maazị Ayoub wee gwa ya na a ga -ewepụta akwụkwọ akụkọ n'oge ọzọ, mana zoro aka na ozi dị na mbipụta mbụ nke akụkọ a nwere njehie.
Mmelite akụ na ụba Tanzania kachasị ọhụrụ site na ọnwa Julaị na -egosipụta nnukwu ikike ngalaba njem na -emetụtaghị. Nyocha ọhụrụ na-ekwu maka nsogbu dịtere aka na-eche njem nlegharị anya na Tanzania yana nsogbu ọhụrụ ọrịa COVID-19 butere.
Nkwupụta ahụ kwuru na ọrịa na-efe efe na-enye ohere maka omume amụma maka mpaghara ka ọ gbakee n'oge na-adịghị anya wee bụrụ injin na-adigide nke mmụba nke ngalaba na-akwalite, itinye mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba, na mmegharị ihu igwe na ibelata ogologo oge.
Enweghị ozi ewepụtara maka nkọwapụta, ihe egwu dị na ya, ụgwọ maka Tanzania na uru a tụrụ anya ya maka njem njem na njem nlegharị anya nke obodo East Africa a n'oge a na -ejighị n'aka nke COVID.
Maazị Cuthbert Ncube, onye isi oche nke Eswatini dabere Ndị njem nlegharị anya nke Africa Ndị ITIC kpọrọ ya ka ọ bịa na mkparịta ụka ya na minista minista Tanzania maka akụ na ụba na njem nlegharị anya Dr. Damas Ndumbaro.
Maazị Ncube jiri ohere ahụ soro onye minista kwurịta ọkwa nkwado na ntuzi aka nke ndị nlegharị anya njem nlegharị anya nke Afrịka nwere ike weta na tebụl maka mkpọsa mkpọsa njem nlegharị anya mba ụwa ọhụrụ maka Tanzania.
Mgbe nzukọ ndị a gachara, ndị nnọchi anya gara Ngorongoro Conservation Area (NCA) na Northern Tanzania.
Kọmitii Njem Nleta Afrịka (ATB) dị njikere iso ndị niile nwere mmekọ na Afrịka kwalite njem nlegharị anya na ire ahịa na Africa. Ebumnuche maka ATB bụ ime Afrịka ka ọ bụrụ otu njem njem ụwa niile kacha amasị.
Mgbe ya na onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Tanzania, ATB kwere nkwa ịkwado nkwado nkwalite njem nlegharị anya East African Community (EAC) nke a ga -eme na nke mbụ na Tanzania.
Maazị Ncube gwara onye ozi ahụ na ATB dị njikere ịkwado Gọọmentị Tanzania site na ọwa ATB zuru ụwa ọnụ gụnyere usoro mgbasa ozi na mmekọrịta ndị isi ndị ọzọ.
Ejiri nkwado nke eTurboNews na 2018.
Onye na-ede akwụkwọ: Apolinary Tairo, eTN Tanzania